Mogadishu Journal » 2018 » March » 15
Madaxweyne Farmaajo oo kulamo gaar gaar ah la yeeshay Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Guddoomiye Jawaari
Mjournal :-Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulamo gaar gaar ah maanta la yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre isagoo kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasada dalka. Kulankan oo ka dhacay xarunta...
Mjournal :-Kooxo ku hubaysan Bastoolado ayaa salaadii duhur kadib ee maanta waxa ay bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ku toogteen Saddex qof, sida ay sheegeen Hay’adaha ammaanka. Weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay Nawaaxiga Shirkaddii hore ee Netko oo ka mid...
Wasiirka Gaashaandhigga oo tababar u soo xiray Ciidamo ka tirsan Danab
Mjournal :-Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Abaanduulaha Ciidanka Xoogga dalka Generaal C/laahi Cali Caanood ayaa cutubyo ka tirsan Ciidamada Danab ee Xoogga dalka tababar mudo Hal sano u socday ugu soo xiray Dugsiga Tababarka...
Mjournal :-Senatarada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xaruntooda Magaalada Muqdisho, waxay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen in shirkadda DP World aysan dalka Soomaaliya ka howlgali karin. 28 ka mid ah xildhibaanada Golaha Aqalka Sare ayaa...
Antonio Conte ayaa shaaca ka qaaday in uu shakhsi ahaan ku amaanay Lionel Messi qaab ciyaareedkiisii quruxda badnaa ka dib markii Barcelona ay Chelsea ka reebtay Champions League habeenkii xalay. Xiddiga reer Argentine ayaa labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii Camp Nou, waxaana...
Mjournal :-Saraakiisha ciidamada Xoogga dalka ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegeen weerar ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee Jubbaland in ay ku dileen 7 dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa...
Maamulka Mandhera oo codsi u diray bulshada Soomaaliyeed
Mjournal :-Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa daabacay in Maamulka Magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ay wada hadal maalinle ah la yeesheen Bulshada Soomaaliyeed, waxayna ku booriyeen iney wadaagaan macluumaadka Amniga. Guddoomiyaha magaalada...
Libya oo amartay in la soo xiro kuwa wax tahriibiya
Mjournal :-Dowladda Libya ayaa amartay xarigga 205 qof oo u isugu jira dad u dhashya dalkaasi iyo ajaanib looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen shabakad dadka u tahriibisa Yurub. Eedeymaha loo haysto dadkan ayaa isugu jira tanriibinta dadka, jirdil, dil iyo kufsi. Xafiiska...
Mjournal :-Guddoomiye kuxigeenka 1aad Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya C/wali Sheekh Ibraahim Muudey oo goor dhoweyd shir jaraa’id ku qabtay hoygiisa ayaa sheegay in mooshinkii laga keenay Guddoomiye Jawaari uu yahay mid sharci ah, isla markaana uu...